कसरी फोटोशपमा छाला चिकनी गर्ने क्रिएटिव अनलाइन
फोटोशपमा छालालाई सुचारु कसरी गर्ने
जब हामी म्यागजिनहरूमा सही तस्बिरहरू वा चित्रहरू देख्दछौं, चिल्लो, चिल्लो छालाको साथ मोडलहरू र उत्कृष्ट नियन्त्रित चमकको साथ, ती छविहरू प्रायः उपचार गर्दछन्। छालाका असिद्धाहरू, झुर्रीहरू, स्कारहरू, एक्ने ... यस्तो चीज हो जुन कहिलेकाँही हामीलाई चिन्ता गर्दछ। एडोब फोटोशपले केहि उपकरण प्रदान गर्दछ ताकि हामी ती निशानहरूलाई कम गर्न वा हटाउन सक्दछौं। यस ट्यूटोरियलमा म तपाईंलाई भन्न लागिरहेको छु कसरी कृत्रिम नतीजामा नपलिकन फोटोशपमा छाला सफा गर्ने। के तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ? ठीक छ, पोष्ट पढ्न जारी राख्नुहोस्!
1 फोटो खोल्नुहोस् र फोटोशपमा सुधार उपकरणहरू पत्ता लगाउनुहोस्
1.1 स्पट सुधार ब्रश
1.2 हिलिंग ब्रश
1.3 वैकल्पिक तरीका
2 फोटोशपमा छालालाई अझ नरम बनाउनुहोस्
2.1 डुप्लिकेट लेयर र पाउडर र स्क्र्याच लागू गर्नुहोस्
2.2 गौसियन ब्लर लागू गर्नुहोस्
3 हराएका विवरणहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्
फोटो खोल्नुहोस् र फोटोशपमा सुधार उपकरणहरू पत्ता लगाउनुहोस्
फोटो खोलेर सुरु गरौं। मैले दुईलाई चुनेको छु, ती मध्ये एक लगभग कुनै retouching छ त्यसैले हामी प्रक्रिया राम्रोसँग देख्न सक्छौं। सबै भन्दा पहिले हामी दुई उपकरणहरू पत्ता लगाउन गइरहेका छौं जुन फोटोशपले सुधार गर्न प्रस्ताव गर्दछ वा हटाउनुहोस् दाग:
उपकरण स्पट सुधार ब्रश
उपकरण कन्सीलर ब्रश
तपाईं दुबैसँग टूलबारमा छ। हामी तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न जाँदैछौं छविमा सब भन्दा देखिने त्रुटिहरू सफा गर्नुहोस्.
स्पट सुधार ब्रश
La फोटोमा स्पट हिलिंग ब्रश उपकरण स्वत: नमूनाहरू र यो के गर्छ जब हामी "अपूर्णता" मा क्लिक गर्छौं वा जुन क्षेत्र हामी सुधार गर्न चाहन्छौं, त्यहाँ केही पिक्सेलहरू प्रतिस्थापन गर्नुहोस् अन्यहरू जुन त्यो नमूनामा प्राप्त भएका छन्।
उपकरण मेनूमा हामी यसको विशेषताहरू परिमार्जन गर्न सक्दछौं, हामी ब्रशको आकार र आकार परिवर्तन गर्न सक्छौं, तर नमूनाको प्रकार पनि, हामी तपाईंलाई सामग्रीको आधारमा भर्न वा वातावरणमा यसलाई लागू गर्ने क्षेत्र समायोजन गर्न सोध्न सक्छौं।
यस जस्ता फोटोग्राफहरूमा, जहाँ त्यहाँ निश्चित बनावट हुन्छ, "वातावरणमा समायोजन" विकल्प सामान्यतया राम्रोसँग काम गर्दछन्, किनकि यसले यसको अझ बढी आदर गर्दछ र हामी यहाँको दाग हटाउने रीटच सफा हो।
यद्यपि स्पट हिलिंग ब्रश उपकरण प्रयोग गर्न सजिलो छ र सब भन्दा चाँडो किनभने यो स्वत: हो, यसले सधैं उत्तम परिणाम दिदैन। उदाहरण को लागी, chicho को तस्वीर को मामला मा एक सानो ग्रेनाइट छ जो कपालको धेरै नजिक छ। स्पट कन्सिलर ब्रशको प्रयोग गरेर, तपाईंले त्यस केशको केही क्लोन गर्नुभयो र नतीजा राम्रो लाग्दैन। भाग्यवस, हामीसँग फोटोशपमा एक उपकरण छ जुनसँग हामी कम्प्युटरलाई हामी के भन्न सक्दछौं जुन हामीलाई यो नमूनाको लागि आधारित हुन चाहिन्छ: सुधार ब्रश.
विकल्प कुञ्जी थिच्दै (यदि तपाईं म्याकको साथ हुनुहुन्छ भने) वा Alt (यदि तपाईं विन्डोजको साथ हुनुहुन्छ भने) तपाईं संकेत गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईं नमूना काम गर्न चाहनुहुन्छ एक क्लिकको साथ। मेरो सिफारिश छ कि तपाईले आफ्नो नमूना छालाको एक क्षेत्रमा आधारित गर्नुहोस् जहाँ त्यहाँ धेरै त्रुटिहरू छैनन्, तब फोटोशपले स्वचालित रूपमा चमक, टोन समायोजित गर्दछ ... जब तपाईं क्षेत्र चयन गर्नुहुन्छ हामी Alt रिलीज गर्दछौं ya ya हामीले भर्खरै ती अपूर्णताहरूमा रंग्नु पर्छ हामी चाहन्छौं कि अदृश्य हुन्छ। यो उपकरणले ठूलो काम गर्दछ, तपाईले यसलाई ठूलो सतहमा लागू गर्दा पनि, जस्तै, यो तेस्रो फोटोहरूमा जुन मैले फ्रेकल्सको यस क्षेत्रलाई मेटाउन प्रयोग गरेको छु।
यो गर्ने अर्को अर्को प्राथमिक तरिका हो छिटो चयन उपकरणको साथ क्षेत्र छनौट गर्दै, र ट्याबमा संस्करण हामी सामग्री क्लिक अनुसार भरणमा क्लिक गर्नेछौं। यसले राम्रो परिणाम दिन सक्छ, यदि सतह धेरै ठूलो छ भने ... म यो विधिलाई धेरै विश्वास गर्दिन।
फोटोशपमा छालालाई अझ नरम बनाउनुहोस्
एकचोटि हामीले सबैभन्दा धेरै देखिने अपूर्णताहरू सच्याएपछि, हामी कसरी फोटोशपमा छालालाई अझ नरम बनाउने हेरौं। यसको लागि हामी के गर्छौं विभिन्न फिल्टरहरू लागू गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई समायोजित गर्नुहोस् सम्भव सबै प्राकृतिक परिणामहरूको लागि।
डुप्लिकेट लेयर र पाउडर र स्क्र्याच लागू गर्नुहोस्
हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा हो नक्कल फोटो तह, तहहरूको नक्कल गर्न तपाईलाई पहिले नै थाहा छ कि तपाई यसलाई नक्कल तह थिच्न वा दिएर गर्न सक्नुहुन्छ, वा मुख्य मेनुमा, तह> नक्कल तह। र यदि तपाइँ यसलाई अनलक गर्नुहुन्छ भने तपाइँले कुञ्जीपाटी सर्टकट कमान्ड + सी द्वारा पनि प्रतिलिपि गरेर टाँस्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि ++ आदेश।
एकचोटि हामीले लेयर नक्कल गरेपछि, हामी यसमा फिल्टर लागू गर्न जानेछौं। हामी मुख्य मेनूमा जान्छौं र हामी चयन गर्न गइरहेका छौं फिल्टर, आवाज, धुलो र स्क्र्याचहरू। हामीले यहाँ प्रदान गर्ने प्यारामिटरहरू छविको आकारमा निर्भर हुन्छन्, तपाईं यसलाई पूर्वावलोकनमा दिनुहुन्छ र तपाईं परीक्षण जानुहुन्छ, म यसलाई4र ० मा छोड्छु। दिमागमा राख्नुहोस् कि यदि तपाईं परिणाम पास गर्नुभयो भने यो एकदम कृत्रिम हो र यो हो हामीले खोजेको कुरा होइन।
यो फिल्टर प्रयोग गरेर, त्यहाँ हराउने फोटोको विवरणहरू छन्, त्यस बारे अब चिन्ता नगर्नुहोस् किनभने हामी त्यसलाई पछि समाधान गर्नेछौं।
गौसियन ब्लर लागू गर्नुहोस्
यो समान तहमा, हामी दोस्रो फिल्टर लागू गर्न जाँदैछौं, फिल्टर> गौसियन ब्लरमा जानुहोस्। यहाँ फेरि मानहरु सूचक छन्, म यसलाई २ को त्रिज्या दिन गइरहेको छु, तर तपाई प्रयास गर्नुहोस् र मानहरू रहनुहोस् जुन तपाईलाई मान्नुहुन्छ हामीले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि छालाको नरम प्रभाव छ।
यो अन्तिम चरण पूर्ण रूपमा वैकल्पिक। म तिनीहरूलाई कृत्रिम देखाउनको लागि अनुरक्षण गर्न मन पराउँदिन, छाला बनावट छ र त्यो बनावट फिल्टर मा राख्नु हराएको छ, कि किन म अन्त मा हो म यसमा एक सानो आवाज राख्न चाहन्छु, म यसमा ०.। हाल्दै छु।
हराएका विवरणहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्
मैले यसभन्दा पहिले नै उल्लेख गरिसकें कि जब हामी फोटोशपमा छाला नरम पार्नका लागि फिल्टरहरू लागू गर्दछौं, त्यहाँ हराएका विवरणहरू छन्। उदाहरणको लागि, केटाको छविमा, दाह्री र कपालको क्षेत्रमा हामी कसरी ती विवरणहरू पुन: प्राप्त गर्न सक्छौं? ठिक छ, हामीलाई के चाहिन्छ भने फिल्टरहरू छालामा मात्र लागू हुन्छन् तर सम्पूर्ण तहमा त्यो होइन हामी यसलाई लेयर मास्क बनाएर प्राप्त गर्ने छौं.
एउटा लेयर मास्क बनाउन हामीले भर्खरै गर्न पर्छ: तह चयन गर्नुहोस् र फोटोमा घेर्ने प्रतीकमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, मास्क पहिलो सेतामा देखा पर्नेछ, यसको मतलब यसले लेयरमा भएका सबै थोक समावेश गर्दछ। हाम्रो कम्प्युटरमा क्लिक गर्दै कमाण्ड + I, यसलाई उल्टाउनुहोस् कुञ्जीपाटी सर्टकट थिच्दा मास्कमा सबै कुरा हटाउनका लागि मास्क कालो रंगको हुनेछ।
ब्रशको साथ र सेतो र color्ग छनौट गरेर हामी हामी ड्रम गर्न गइरहेका छौं जुन हामी समावेश गर्न चाहन्छौं, त्यो हो, जहाँ हामी ती फिल्टरहरू लागू गर्न चाहन्छौं भन्ने क्षेत्रहरू, यदि तपाईंले गल्ती गर्नुभयो भने चिन्ता नलिनुहोस्, कालो ब्रशको साथ तपाईं त्यो चयनबाट बाहिरिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं राम्ररी हेर्नुभयो भने, तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि तपाईं ती विवरणहरू पुनःप्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, यद्यपि वास्तवमा तपाईंले के गरिरहनु भएको पृष्ठभूमि लेयरलाई दृश्यमा छोडिराखेको छ (छविको मूल संस्करणको साथ एक) जुन उनीहरूलाई साँच्चिकै सुरक्षित गर्दछ।
यो अन्तिम नतिजा हुनेछ, तपाइँ के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » फोटोशपमा छालालाई सुचारु कसरी गर्ने
एडोब फोटोशप एप्पल सिलिकॉनको साथ म्याकमा पहिले नै अवस्थित छ